Ubudlelwane Umtshato Izitayela zomtshato
AmaGrike asendulo ayewadumileyo ngenxa yokukwazi ukuhlela iiholide ezonwabileyo nezolonwabo, indawo ekhethekileyo phakathi kwabo, ewe, yayinomdla womtshato. Bakholelwa ukuba umtshato uyisipho soothixo, kwaye oothixo balindele ukubulela esi sipho ngendlela yokubhiyozela, mhlawumbi, ubomi bentsapho bunzima kwaye bunzima. Ukuqhuba umtshato kwindlela yamaGrike akuyi kufuna utyalo-mali olunzulu kwaye kuya kunika ithuba lokumelana nesithethe somtshato wesikolo.
Umtshato wesiGrike somtshato
Ukulungiselela umtshato phantse rhoqo kuqala ngokuthumela iindwendwe, kwaye umtshato wesiGrike awukho. Iindwendwe kufuneka zive umoya wezobhiyozo ezizayo. Ngoko ke, njengememo, kulungele ukusebenzisa iphepha elixutywe ngolu hlobo lweprintski kunye nombhalo ococekileyo, imifanekiso yezithixo kunye nemihlobiso yeGrike.
Ixesha leshilo lifanelekileyo kakhulu umtshato onjalo. Ngokuqhelekileyo amaGrike agubha imithendeleko emzimbeni wamanzi, owafanekisela ubutyebi nokuzala. Ngoko ke, ukuba kunokwenzeka, isidlo sinokulungelelanisa kummandla welibi, umlambo okanye kwindlu yezindlu kunye nedama lokubhukuda. Ukuba usuku lomtshato luwela kwixesha elibandayo, ngoko ukubhiyozela kwayo indawo yokutyela kunye nesimo esifanelekileyo siya kwenza.
Ngokwesiko, abatshabatshatiweyo kufuneka bahambe phantsi kwebhokisi lokuhlobisa elenziwe ngeentyatyambo zangempela kwaye luphawu lomtshato ovuyayo. Inokufakela zombini ngaphakathi nangaphandle. Ukudala indawo yokuzonwabisa, ukusetyenziswa kweebhola kunye neerbhoni akuvunyelwanga - kwiiGrike zasendulo, imihlobiso yomthendeleko yayiyientyantyambo eziphilayo kunye namagqabha ephepha elimbala.
Ukwenziwa kwetafile kufuneka kuhambelane nomxholo womtshato. Ngaloo nto, iingubo ezilula ezilula zeGrike kunye nemihlobiso efana neyodwa ifanelekile kumbala we-pastel. Kula macwecwe unokubeka iifesi ze-amphora ezizaliswe ngewayini, eziza kudala indawo efanelekileyo yeGrike. Itafile kufuneka zizele iintyatyambo neziqhamo.
Izambatho zeendwendwe kunye nabasanda kutshata
Njengengubo yomtshakazi, imbobo yokukhanya evulekileyo kunye ne-back-polollete ejulile, kwindawo eselunxwemeni efunyenwe ibhande okanye ibhodi ebanzi, iya kuhambelana. Kule meko, izandla kufuneka zihlale zihamba ze. Ngexesha elifanayo, kuyinqweneleka ukuba ungabi nesigqubuthelo kunye nobukho beentloko ezinamabhokhwe kunye nenhlanganisela yezitshixo kunye nezilwanyana zamaGrisi ngeentyantyambo ezilukiweyo. Ukuba umtshakazi unesihlwele esifutshane, ikhanda lakhe liyakubonakala likhulu kakhulu, lihambelana nentoni yesambatho.
Umyeni ongumGrike kufuneka ukuba agqoke kwi-toga kunye nezicathulo, kodwa ukuba unamathele ngakumbi kwinguqu ye-classic yengubo, ngoko unokuba ngumtya weetoni ezikhanyayo kunye nomsila weentyantyambo ezitsha zifakwe entanyeni.
Iindwendwe kufuneka kwakhona zigqoke ngokufanelekileyo kumxholo womtshato. Abafazi kwiingubo zokugqoka, ezifana nomnqamlezo wokugqoka umtshakazi, kunye namadoda e-toga kunye neembadada. Iindwendwe zindoda ezithusayo zingenakho ukuhluthwa nge-togas ngaphezu kweengubo zabo eziqhelekileyo, ukufumana umtya wokukhanya ehlombe kunye ne-brooch enkulu. Izambatho ezinjalo zingaba nemibala emininzi kwaye zixhomekeke kwisikhundla seendwendwe okanye ziyahlukahluka ngokuxhomekeke kwintsebenziswano kwicala lomtshakazi okanye umyeni. Kwaye ukongezwa kwezi zambatho ezintle kufuneka kusebenze njengama-willow okanye i-laurel ingubo eguguwe ngumtshakazi kubantu abakhoyo.
Inani elikhulu lezitsha ezimnandi, ezihlala zitshintshile kwiilayibhile - oko kukuphawu lomtshato kwindlela yesiGrike. Into ephambili etafileni kufuneka ibe ngamarada, ubuncinane kwiintlobo ezintathu ukuya ezintlanu, kunye nenyama, igalelwe kakuhle, ithambile kwaye ihlaziye. Ukongezelela, kulungile ukuba phakathi kwezidlo zokutya kuya kubakho izitya zokutya zaselwandle. Musa nje ukulibala malunga neminqumo kunye noshizi. Iziphuzo ezinxilisayo zifanelekile kwiwayini elincinci elincinci elincinane.
Ukuzonwabisa ngeendwendwe kunye nokubamba imincintiswano eyahlukeneyo ingaba ngababukeli abakhethekileyo okanye amaNgqina agqoke imiyalelo yeothixo bamaOlimpiki. Izivakashi zinganikelwa ukulwa noZeus ngokwakhe kwisihlengo somtshakazi, ukuncintisana ngolwazi lwesiGrike okanye kwiwayini ukunambitha. Njengomculo womculo, iingoma zesizwe zamaGrisi okanye ukusetyenziswa kwabaculi bedlala iihabhu ziya kuhambelana.
Ngaloo ndlela, zonke iinkcukacha zesiGrike ziyakwenza ukuba umtshato ube mnandi kwaye awuqhelekanga. Kuya kunika bonke abanakho imizwa emihle kwaye bashiye kwimemori yabo inkumbulo ezintle.
Umtshato ngesitayela sombono
Umtshato "ophakathi" ngomoya weentambo
Umtshato ngesitayela se retro
Umtshato kwisitayela se-antique
Umtshato waseHollywood ngohlobo lwe "Bondiana"
Umtshato ngendlela yaseYurophu
Isaladi ye-rice ye-noodle ne-tofu
Inyama kunye namazambane kunye nama-mushroom
Iipropati eziwusizo zohlaza oluhlaza, omnyama kunye nohlobo lwe-herbal
I-European manicure engavumelekanga
Ngaba kunokwenzeka ukuba umfazi abe yedwa?
Leek in sauce
Ukuxhomekeka kwezesondo zomntwana kwiimeko ezahlukeneyo
Isikrini seBlue njengenguquko yento esilayo ebomini
UTatiana Navka wabika i-crystal yintombi yakhe encinci
Uxinzelelo lwe-intracranial: unyango kunye nezilwanyana zomntu
Indlela yokuyeka ukutshaya
Iyeza lemveli: ukunakekelwa kwehlohlo
Indlela yokwenza lula
I-Sauce isuka kwi-cheese ene-mold
Ukunyamekela isikhumba sengxaki ekhaya
Ukucetyiswa kwengqondo, iqela le-psychotherapy
Iimpawu ezinamandla ezinemizuzu engama-15 kunye ne-Boost Gel esuka kwi-LCN